Fanoherana · Novambra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Novambra, 2013
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Novambra, 2013
Eoropa Afovoany & Atsinanana17 Novambra 2013
Filipina, Fanontanian'ireo Sisam-patin'ny Rivodoza: ‘Aiza ny Mpitondra Antsika?’
Azia Atsinanana14 Novambra 2013
Miraraka ny fanampiana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, saingy mitaraina kosa ireo tra-boina tamin'ilay rivodoza fa tsy mbola naharay ry zareo na dia fanampiana kely avy amin'ny governemanta aza
Azia Atsinanana13 Novambra 2013
Sambany nitsidika an'i Eoropa ny filoha Koreana Atsimo, nisolelaka nanatsara azy fotsiny no nataon'ny fampahalalam-baovao. Koreana, fa tsy nitatitra izay tena anton-diany tany Eoropa.
Eoropa Afovoany & Atsinanana13 Novambra 2013
Nampanginin'ny manampahefana any amin'ny faritra ao Rosia ireo bilaogera mpanohitra ao an-toerana, amin'ny fanenjehana azy ireny ho manao resaka 'tafahoatra / extremisme'.
SARIPIKA: ‘Hetsika Mangina’ Mitaky Fifidianana Ao Maldives
Azia Atsimo09 Novambra 2013
tsy tankina noho ny fanemorana hatrany ny fanirian'ny vahoaka hanatontosa fifidianana malalaka sy marina araka ny tahirin-tsary iray nalaina nandritra ny 'hetsi-panoherana mangina'.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Novambra 2013
Nanjary fanao ara-kolontsaina ao amin'ny firenena an'ady ny hatsikana, indrindra hatsikana manapa-tsinay. Nalaza be vao haingana tao amin'ny Twitter ny teny ifankafantarana #PalestinianPickUpLines, ary nahazo lohahevitra vaovao am-polony tao anatin'izay andro vitsy lasa izay
Hazakazaka Ho An'ireo Mpiasan'i Samsung Teo Aloha Marary Ao Korea Atsimo
Azia Atsinanana06 Novambra 2013
Mijaly ny aretina avokatry ny fepetra momba ny asa ireo mpiasan'ny Samsung teo aloha, mitolona mafy eny amin'ny fitsarana izy ireo ary miandry onitra. Nisy fivoarana tsara ny raharaha vao haingana.
Nitranga ny fanoherana ilay volavolan-dalàna taorian'ny nitaterana hoe mety hanome tombony an'ireo politisiana mpanao kolikoly sy mpanitsakitsaka zon'olombelona ny fanitsiana natao taminy.